Ekwentị Kpọọ Ndebanye aha
Ekwentị Ekwentị anaghị akpọ oku
Ọ dị ka a ga-agbakwunye nọmba mkpanaka na ndekọ aha Indiana nke akpọla oku. Enweghị okwu ọbụla ma ma ọ bụ na nke a ga-emetụta ederede ederede, ma enweghị obi abụọ na nke a dị n'akụkụ nkuku.
The United Kingdom na Canada tinyeworị nọmba ekwentị na nkwanye ugwu ha akpọrọ registries. Na United States, ma Utah na Michigan nwere Kpọọla registries nke gunyere ikpo oku na SMS. N’uche nke m, ekwere m na nke a bụ nnukwu akụkọ. M na mgbe na-akwado maka ikike dabeere na ahịa. Site na nnabata nke ngwaọrụ mkpanaka yana ndị na-eto eto, anyị kwesịrị itinye akwụkwọ DNC n'afọ ndị gara aga. N'ezie, enweghi ike ịchịkọta ọtụtụ iri nde dollar na ebubo maka ọrụ mkpanaka iwu na-akwadoghị.
Nke a dị mkpa maka ndị na-ere ahịa na ndị na-enye ọrụ. Ọ bụrụ na ị na-tinye n'ọrụ olu ozi ma ọ bụ ederede ozi ọrụ, ị ga-achọ ijide n'aka na ọrụ gị na-ehichapụ ndekọ nọmba site na izipu ozi. Walter Meyer, Onye isi ala na COO nke Vontoo - onye na - eduga olu na ozi ederede kwuru na ụlọ ọrụ ha na - enyocha oku na - apụ apụ megide ndepụta gọọmentị etiti na steeti DNC.
Ihe kwesiri iburu n’uche bụ na ọ bụrụ na ụlọ ọrụ edepụtara ikike ịkpọtụrụ mmadụ, ha nwere ike ịme ya ọbụlagodi na ọnụọgụ onye ahụ dị na DNC. Walter Meyer, Vontoo.
Walter na-agbakwụnye na ọ bụ ihe niile maka ndepụta akpọtụrụ maka ozi ejula (nzipu ozi) na email, kwa… ọ bụ mmeri maka ndị na-ere ahịa ahịa na ọha na eze. Walter kwurịtara ihe ịma aka nke ire olu ma kwuo na ọ bụ ezie na Vontoo lebara anya na ahịa, uto ha kachasị ike bụ na ncheta, ọkwa, na nyocha.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na akpọla ndị na-edebanye aha anaghị eme otu ụzọ ahụ email. Na email, ị nwere ike izipu email mbụ ọ bụrụhaala na ị nwere ụzọ ịpụ. Ugbu a, nke a bụ otu esi ezipụ ozi ederede… ị ga - ahọrọ iji nweta ozi ederede ma nwee ike ịpụ apụ n’oge ọ bụla. Ozugbo registries (na ụta na-esote Iwu) dị, ị nweghị ike izipu ozi mbụ ahụ - ọzọ ị nwere ike itinye ụfọdụ ụgwọ ọjọọ!
Nke a bụ ndepụta nke ebe ị nwere ike ịhụ ndepụta akpọla oku site na steeti: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Maine, Michigan, Minnesota, Missouri, Mississippi, Montana, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Wisconsin na Wyoming.
The gọọmenti etiti akpọla ndekọ n'ihi na United States adịghị ugbu a chebe mobile ọkụ eletrik… ma m mara mma n'aka na mgbakwunye na nke mobile na ederede ozi bụ nso.
Mekota WordPress na Blog Talk Radio